आफै अस्पताल पुगेकी महिलाको रिपोर्ट देखेर डाक्टरसमेत च,कि,त ! – Khabar Silo
आफै अस्पताल पुगेकी महिलाको रिपोर्ट देखेर डाक्टरसमेत च,कि,त !
Posted on November 2, 2020 Author khabar silo Comment(0)
एक महिला ३२ वर्षदेखि सामान्य जी,वन बाँ,चिर,हे,की थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष बितिसकेको थियो र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो चलिरहेको थियो तर अ,चा,न,क उनलाई थाहा भयो कि उनी एक पुरुष हुन् र उनलाई टेस्टिक्यूलर क्यान्सर छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बीरभूममा बस्ने यी महिला शारीरिक रुपमा त महिला हुन् तर आनुवंशिक रुपमा उनी पुरुषको रुपमा जन्मिएकी थिइन् ।जब उनको स्थिती अस्पताल पुग्यो तब डाक्टर पनि चकित परे र उनीहरुले यो समस्याबारे थाहा पाउनका लागि एउटा लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्यो । त्यसपछि थाहा भयो कि यी महिलालाई एन्ड्रोजन इन्सेन्सिटिभिटी सिन्ड्रोम छ जसमा व्यक्तिको शरीर महिलाको हुन्छ तर क्रोमोसोम पुरुषको हुन्छ ।
यी महिला केहि महिना अघि पेट दुख्ने समस्या लिएर नेताजी सुभाष चन्द्र बो,स क्या,न्स,र अस्पताल गएकी थिइन् । उनको उपचार गर्ने डाक्टरले उनलाई कस्तो रोग लागेको छ भनेर बुझ्न सकेनन् ।क्यान्सर अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट क्लिनिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर अनुपम दत्ता र कन्सल्टेन्ट सर्जिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्छर सौमेन दासले उनको उपचार गरिरहेका थिए ।
डाक्टर अनुपम दत्ता भन्छिन्, ‘महिला अत्यधिक पेट दुख्ने समस्या लिएर अस्पताल आएकी थिइन् । जब उनको परीक्षण गरियो तब उनको पाठेघर (गर्भाशय) र ओभरी नभएको थाहा भयो र पेटमा एउटा ट्युमरजस्तो देखियो । जब हामीले उनको बायोप्सी निकाल्यौं तब थाहा भयो कि उनलाई सेनिनोमा छ जुन पुरुषमा हुने टेस्टिक्यूलर क्यान्सर हो ।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
‘यसमार्फत् हामीलाई थाहा भयो कि महिला एक दुर्लभ रो,ग एन्ड्रोसन इन्सेन्सिटिभिटी सिन्ड्रोमबाट ग्रस्त छिन् । यद्यपि, उनी सामान्य जीवन बाँचिरहेकी छिन् र यो सिन्ड्रोमका कारण उनको वैवाहिक जीवनमा पनि कुनै असर परेको छैन ।’ डाक्टर अनुपमका अनुसार यो रोग लाग्दा अन्य कुनै समस्या हुँदैन । तर महिला कहिले आमा भने बन्न सक्दिनन् । उनको शरीरमा पाठेघर नै हुँदैन । यसै कारण यी महिला कहिले पनि महिनावारी भइनन् । महिलाले महिनावारी नभएकोमा उपचार पनि गराएकी थिइन् तर डाक्टरले पाठेघर नभएको कारण पत्ता लगाउन कोसिस गरेनन् । कोही महिलामा जन्मजात नै यो अङ्ग नहुने भएकोले पनि यसको कारण नखोजिएको हुनसक्छ ।
यो एक जेनेटिक डिसअर्डर हो जसले बच्चाको यौ’नाङ्ग र प्रजनन अङ्गलाई प्रभावित पार्छ । यसमा यौ’ना,ङ्ग अविकसित हुनसक्छ र प्रजनन अङ्ग शरीरमा हुँदै हुँदैनन् । डाक्छर अनुपम दत्ताका अनुसार जेनेटिक डिसअर्डरमा बिरामीको कुनै गल्ती नै हुँदैन । यो रोग लागेकाहरुको शरीरबाट निस्कने टेस्टोस्टेरोन हर्मोनलाई शरीरले स्विकार नै गर्दैन जसका कारण उनको शरीरमा यसले केहि असर गर्दैन । त्यो टेस्टोस्टेरोन पछि एस्ट्रोजनमा परिवर्तन हुन्छ जुन महिलाको हर्मोन हो । जसकारण बच्चा महिलाको रुपमा नै बढ्दै जान्छ । यो एक दुर्लभ रोग हो र करिब २२ वा २५ हजार बच्चामा यस्तो रोग देखिन सक्छ । साथै यो सिन्ड्रोमबाट ग्रस्त सबै महिलालाई टेस्टिकल क्यान्सर हुन्छ भन्ने नै छैन । यद्यपि, पहिले नै सिन्ड्रोम बारे थाहा भए क्यान्सरको खतराबाट भने बचाउन सकिन्छ ।(बिबिसी –बाट)
महामारीमा विद्यालय कसरी खोल्ने ? यस्तो छ सीसीएमसीको निर्देशन
Posted on September 2, 2021 Author khabar silo
महामारीका कारण लगभग डेढ वर्षदेखि भौतिक रुपमा विद्यार्थीहरुको पठन–पाठन अवरुद्ध हुदै आएको छ । विद्यालय र कलेजहरू बन्द भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरुमा त परेको छ नै, निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुको रोजगारीमा समेत असर परेको छ । शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक तथा लगानीकर्तासमेत ऋणमा डुब्ने स्थिति सिर्जना भई चौतर्फी क्षेत्र प्रभावित बनेको छ […]
Posted on August 29, 2021 Author khabar silo
शास्त्रअनुसार हरेक मनुष्यको जीवनमा कैयाँ परिवर्तनको कारण हुने गर्दछ । ज्योतिष शास्त्रअनुसार हातमा धागो बान्नाले पनि मानसिक जीवनलाई प्रभावित गर्दछ । धागो कुन रङ्गको बाँध्ने यो हरेक मानिसको राशिमा भर पर्दछ । जहाँ कालो धागोलाई नराम्रो नजरबाट बच्नको लागी लगाइन्छ । भने रातो धागो शान्ति र सुख समृद्धिको लागी बाँध्ने गरिन्छ । यहाँ यस्ता राशि […]
भोलिबाट ग्यास ११ सय २० रुपैयाँमा र चिनी ६३ रुपैयाँमा पाइने (सूचना सहित)
Posted on June 3, 2021 June 3, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित २० प्रतिशत छुट सुविधाको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबीच भएको बैठकमा सरकारले बजेटमार्फत निषेधाज्ञा अवधिभर छुट सुविधा उपलब्ध गराउने सामग्रीको विवरण र सोको मूल्य तथा विक्री वितरण हुने स्थानको साल्ट […]
भगवान जस्तै श्रीमान ! सबैले आ’स मा’रेकी श्रीमतीलाई यसरी बचाए !
ढाड दुख्ने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ कपुरको प्रयोगबाट यसरी पाउनुहोस् राहत